चिट चोर्ने उत्कृष्ट तरिका… « Gajureal
चिट चोर्ने उत्कृष्ट तरिका…
प्रकाशित मिति: २० चैत्र २०७५, बुधबार ०७:३५
चौडाई, केवल दुई इन्चको हेण्डिप्लास्टजस्तो मात्र ! लम्वाई भने पुरै एक फिटको धोती बराबर ! अत्यन्तै मेहनतको श्रृजनासिलता ! सायद ठुलो पेजमा लेख्नु परेको भए यति सुन्दर श्रृजना पक्कै हुने थिएन । मेहनत पनि किन नगरुन्, आखिर अघि बढ्न र सिँढी चढ्न सहयोग पुर्याउने भर्याङ पनि हो यो ।
यसको अझै रमाइलो पक्ष के छ भने, एक फिट कागजलाई बाह्र इन्चमा फ़ोल्ड गरिएको छ । प्रत्येक इन्चको फोल्ड एउटा सुन्दर फुल हो , तर बगैंचाको फुल होईन, टिचरलाई फुल यानेकि मुर्ख बनाउने फुल अर्थात चिट हो !
यो चिट काठमाण्डौमा एउटा परिक्षा केन्द्रको बाथरुमको मा भेटिएको हो , कुनामा थुप्रो लागेको झण्डै एक पाथी चिट मध्येको एउटा सानो अंश हो । यो आकर्षक मेहनतलाई देख्ने जो कोहिलाई पनि एउटा नमूना बोकौँ बोकौँ लाग्छ । एकछिन भए पनि ओर्काई फर्काई हेर्न मन लाग्छ । चर्चा-परिचर्चा गर्ने इच्छा हुन्छ ! आफ्ना पुराना यादसँग मिल्दो भए एक छिन बिगतमा रमाउन रहर जाग्छ ।
सिर्जनशील चिटकारिता देखेपछि भन्न मन लाग्छ- घोक्छौ, सम्झन सक्नेगरी घोक, डिस्टिङ्ग्सन आउनेगरी ठोक ! भरसक चिट खल्तीमा हाल्नु नपरोस्, गार्ड देख्दा फाल्नु नपरोस् । सक्छौ चिट् नचोर, सक्दैनौ चोर तर कलात्मक पाराले चोर । चोर्नु पनि त् एउटा कला हो ! 🙂
सिसीटिभी अपडेट : देश अब सरकारले हैन कम्पनीले चलाउने, प्रधानमन्त्रीको साटो सिईयो, राष्ट्रपतिको साटो डाईरेक्टर
सर्बियामा गधाको दुधबाट बनाइन्छ संसारकै महंगो पनीर !गधाको पसिनाबाट पानी निकाल्नेलाई अरबपति बनाइने ! जनकपुरमा
‘सुपर6सिस्टर्स’को भट्टराई धमाका : एउटै परिवारमा दुई दर्जन…